DEUTSCH DRAHTHAAR DOG MACLUUMAADKA IYO SAWIRADA - EEYAHA
Deutsch Drahthaar Dog Macluumaadka iyo Sawirada
Nin Jarmal ah oo silig leh
Deutsch Drahthaar waa eey dhexdhexaad ah, oo si fiican u muruqsan. Jidhku waxyar buu ka dheer yahay inta uu dheer yahay. Qalfoofku waa mid ballaadhan oo leh joogsi dhexdhexaad ah. Xuubku waa mid dheer oo toosan oo u horseeda sanka madow ee madow. Indhaha dhexdhexaadka ah, indhaha oval waa bunni, oo sunniyaha dhererkoodu dhexdhexaad yahay. Dhegaha waa wareegsan yihiin, oo u dhow yihiin madaxa. Ilkaha waxay ku kulmaan qaniinyada maqaska. Qoorta ayaa xoog leh oo caato ah. Laabta ayaa qoto dheer oo ballaadhan. Waxaa inta badan laga saaraa soo deynta (Dewclaws). Dabada sare ee sare waxay kuxirantahay laba meelood laba meelood dhererkeeda asalka ah. Fiiro gaar ah: Diraacyada dabogu waa sharci darro inta badan Yurub. Koodhku wuxuu leeyahay koodh hoose oo cufan xilliga jiilaalka xagaagana khafiif ah. Jawiga u adkaysta, biyaha celiya, jaakadda kore ee dhoobada ayaa toosan, jiifsan oo adag oo qiyaastii 2 inji (5.8 cm) dherer ah. Timaha gadhka, wejiga iyo dhogorta dhogorta ayaa inyar ka dheer in wajiga laga ilaaliyo. Midabada jaakadu waa beer iyo cadaan, midkood leh shilinta, roon ama dhibco iyo mararka qaarkood beer adag. Madaxu waa beer, ama leh ama aan lahayn olol cad iyo dhagaha oo ah beer.
Deutsch Drahthaar waa mid firfircoon oo caqli badan. Iyagoo u hamuun qaba inay wax bartaan oo ay daacad u ahaadaan qoyskooda, waxay u baahan tahay ilaaliye ku habboon habka. Drahthaar wuxuu jecel yahay in la mashquuliyo wuxuuna ku raaxeeyaa u shaqeynta milkiilaheeda. Waa mid saaxiibtinimo leh kuwa ay taqaan, laakiin waxay ku fogaan kartaa shisheeyaha waana inay ahaataa bulsho ahaan, doorbiday da'da yar . Haddii ay dareento milkiilaha waa qabow ama dadban waxay noqon doontaa halkii si kas ah. Dareenkeeda ugaarsigu wuxuu ku sasabaa inuu meeraysto. Drahthaar awood leh oo firfircoon caajiso oo ay adag tahay in la maareeyo la'aanteed jimicsi ku filan . Deutsch Drahthaar waa wax wanaagsan oo hareeraha ka socda gundog awoodo inay ugaarsato nooc kasta oo ciyaar ah nooc kasta oo dhul ah. Eygan ayaa leh san wanaagsan wuxuuna kala socon karaa, tilmaami karaa waxna ka soo qaadan karaa dhulka iyo biyaha labadaba. Waa mid deggan, nool oo xoog badan. Carruurta waa in la baro sida loo soo bandhigo xirfadaha hogaamineed ee saxda ah . Haddii eeygan arkin aadanaha sida kor ku xusan si taxadar leh ayey u noqon doontaa xukumaya oo riixaya waxaana laga yaabaa inay isku dayaan inay xukumaan xoolaha kale. Hoggaaminta saxda ah waxay si fiican ula qabsan doontaa eeyaha kale iyo xayawaanka guryaha ku nool. Drahthaars waxay sameeyaan ilaalin wanaagsan.
Dhererka: Ragga 24 - 26 inji (60 - 67 cm) Dumarka 22 - 24 inji (56 - 62 cm)
Miisaanka: 60 - 70 rodol (27 - 32 kg)
Khadadka qaarkood waxay u nugul yihiin dysplasia sinta, infekshinka dhagaha, hiddo-wadaha indhaha iyo maqaarka kansarka .
Deutsch Drahthaar laguma talinayo nolosha guriga. Waxay noqon kartaa xoogaa sarreysa oo gudaha firfircoon ayaa u baahan jimicsi fara badan si looga hortago degganaansho la'aanta gudaha ee daran. Waxay kufiicnaan doontaa ugu yaraan deyr weyn.
Eygan waa mid firfircoon oo aan daal lahayn. Aad ayey muhiim u tahay inay hesho jimicsi xoog leh maalin kasta si looga hortago inay noqoto mid sarreysa oo leh degganaansho la'aan daran oo gudaha ah. Noocani wuxuu caqabad ku noqon karaa xitaa qoyska ugu firfircoon mana ahan in loo qaato sida xayawaan guri joogta ah ilaa ay damaanad qaadi karaan jimicsi fara badan oo maalinle ah. Nooca ugu fiican ayaa shaqeeya marka la shaqeynayo, laakiin haddii aysan taasi suurtagal ahayn waxaa loo baahan yahay in la qaato maalin kasta, deg deg ah, socod dheer , orod ama ku garabsoco markaad baaskiil wado. Waa saaxiibo aad u fiican oo orod-jecel waxayna jecel yihiin dabaasha iyo soo-celinta. Intaad socod ama socodka ku baxdo, hubi inaad ka dhigto ciribta eeyga dhinaciisa ama gadaashiisa qofka haya hogaaminta, marna hore, sida dareenku u sheego eeyga hogaamiyaha ayaa hogaaminaya wadada, hogaamiyahaasina wuxuu ubaahan yahay inuu yahay aadanaha.
Koodhka Deutsch Drahthaar waa in lagu cadaydo qiyaastii laba jeer usbuucii iyadoo burush caday adag leh. Koodhku wuxuu u baahan yahay xoogaa dhar ah, laakiin ma adka in la barto sida loo sameeyo. Timaha waa in gacmaha lagaa siiyaa mararka qaarkood iyadoo kuxiran xaalada jaakada. Badanaa waa la khafiifiyaa guga iyo deyrta. Maydho oo keliya markii loo baahdo. Timaha jaakadu waa inay ahaadaan kuwo adag sida ugu macquulsan, laakiin waa inaysan u muuqan kuwo aan fiicnayn. Hubi dhegaha si aad u hubiso inay nadiif yihiin. Cagaha waa in la hubiyaa ka dib marka eeyga shaqada ka baxo. Noocani waa celcelis daadiya.
Deutsch Drahthaar waxaa lagu horumariyey Jarmalka bilowgii qarnigii 20aad iyadoo laga gudbayo Tilmaamaha Gaaban ee Jarmalka oo ay weheliyaan Griffon, Stichelhaar (eey lagu horumariyey ka gudubka tilmaamaha, Foxhound, Pudelpointer, iyo eyga biyaha ee Poland) iyo Pudelpointer (eey ahaa iskutallaab u dhexeysa Poodle iyo tilmaame). The Tilmaamaha Tilmaamaha Jarmalka asal ahaan ka soo jeeda Deutsch Drathaar. Kala qaybsanaanta ayaa dhacday markii loo soo dhoofiyey Mareykanka horaantii 50-meeyadii. Waqtigaas rajada abuureyaasha Mareykanka waxay heleen qawaaniinta Verein Deutsch Drahthaar (VDD) Naadiga Taranka Jarmalka oo xakameynaya noocyada adduunka oo dhan inay noqdaan kuwo xaddidan. In kasta oo ay abuuri karaan eeyaha, haddana lama diiwaangelin karin sidaa darteed ma ay u iibin karaan sida eeyo caan ah ama diiwaangashan. Waxay ka shaqeynayeen Naadiga Xannaanada Mareykanka si ay u helaan nooc lagu daro ujeedada ah inay awoodaan inay diiwaangeliyaan eeyadooda Tusaale ahaan, Deutsch Drathaar wali lama baari karo UK. Qashin kasta oo ka dhasha isku dheelitirka Deutsch Drathaar ee Boqortooyada Midowday ee Boqortooyada Midowday waxaa laga diiwaangelin karaa naadigooda aqal, si kastaba ha noqotee lagama diiwaangelin doono VDD. Farqiga ugu weyn ee udhaxeeya Deutsch Drahthaar iyo tilmaameha Wirehaired Jarmal ayaa ah in Deutsch Drahthaar wali loo xaglinayo heerarkii la aasaasay in kabadan 100 sano kahor markii ay soosaarayaasha Jarmalku go'aamiyeen inay soosaariyeen eeyga ugaarsiga badan ee ugaarsiga badan. Barnaamijka taranka iyo shuruudaha kaqeybqaadashada, waxay gacan ka geysteen hubinta in cilladaha hidde-wadaha aan dib loogu laabanaynin caadka iyo in astaamaha astaamaha lagu soo saaray caanaha la ilaaliyo. GWP waxay leedahay halbeeg u gaar ah iyadoo xoogaa badan ay fiirsashadu ku jirto giraanta showga isla markaana ka yar tahay rabitaanka dabiiciga ah / wadista raacdada ciyaarta. Deutsch Drahthaar waxay awoodaan inay tilmaamaan, raadiyaan, soo ceshadaan, oo ay u shaqeeyaan sidii gundog, labadaba berrin iyo biyo baal iyo dhogor labadaba.
Gun Ey, ugaarsi
NAVHDA = Ururka Eeyaha Ugaarsiga Ah ee Waqooyiga Ameerika
VDD = Isbahaysiga Tilmaamaha Fiilooyinka Jarmalka
VDD / GNA = Deutsch-Drahthaar Association, Kooxda Waqooyiga Ameerika
Griffin wuxuu matagayaa Elchertz Deutsch Drahthaar 5 sano jir
Terland galbeedka buuraleyda buuran oo buuxa
sawirrada eyda rogeesback
dhasha cavalier muqisho boqorkii Charles
cabirka isku darka jamacada Jarmalka